कोरोना भाइरस (Covid 19) – SabKura Samachar
कोरोना भाइरस (Covid 19)
बेलायतमा कोरोना संक्रमित नेपाली नर्स २३ दिनपछि आईसीयूबाट नर्मल वार्डमा
लण्डन- बेलायतमा कोरोनाको सङ्क्रमणले विगत २३ दिनसम्म सघन उपचारकक्षमा रहेकी नर्स उमा प्रधानलाई सामान्य वार्डमा सारिएको छ । उमालाई कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि साउथ इष्ट ससेक्सको कन्क्वस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । सो अस्पतालमा कार्यरत १०० भन्दा बढी सहकर्मीले उमालाई सामान्य शय्यामा सार्दा ताली बजाएर सम्मान प्रकट गरेका थिए । उमाले भनिन्, “म सघन उपचार कक्षमा …
बेलायतमा कोरोना संक्रमित नेपाली नर्स २३ दिनपछि आईसीयूबाट नर्मल वार्डमा Read More »
काठमाडौं । धवलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी ६५ वर्षीया वृद्धा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन् । पछिल्लोपटक कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएपछि वृद्धा शनिबार अपराह्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको बताएकी छन् । बाह्रखरीसँग खुसी साट्दै वृद्धाले कोरोनालाई पराजित गरेर फर्किएको प्रतिकृया दिएकी छन् । “जाँच गर्दा कोरोना नदेखिएपछि डाक्टरहरूले घर जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो । अस्पतालमा लिन छोरो …
कोरोना जितेर फर्किएँ बाबु ! प्रहरीले घरसम्मै पुर्‍याइदिनुभयो Read More »
६ वैशाख, काठमाडौं । नेपालकी दोस्रो कोरोना संक्रमित युवती निको भएर घर फर्किएकी छन् । चैत १० गते कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको उनी शनिबार टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी हुन् । उनले आफू पूर्ण निको भएर फर्किएको सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएकी छन् । आफ्नो उपचारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले राम्रो सहयोग गरेको …
नेपालकी दोस्रो कोरोना संक्रमित युवती निको भएर घर फर्किइन् Read More »
के कोभिड–१९ को महामारीमा बरदान बन्ला यो औषधी ?
‘रेम्डेसिभिर’ नामक प्रायोगात्मक औषधी लिइरहेका कोभिड–१९ का बिरामीहरु चाँडो निको भइरहेको समाचार स्टाट न्युजले बिहीबार प्रकाशित गरेको छ । यस औषधीको प्रयोगबारे भइरहेको छलफलको भिडियोको आधारमा उक्त समाचार तयार गरिएको थियो । यस औषधीको क्लिनिकल ट्रायल (परीक्षण) मा भाग लिएका बिरामीहरुमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर लक्षण तथा ज्वरोको लक्षण रहेको थियो । तर, उनीहरु उपचार शुरु …
के कोभिड–१९ को महामारीमा बरदान बन्ला यो औषधी ? Read More »